Shir dib loogu eegayo mashaariicda Horumarinta Degmoyinka Puntland oo Qardho ka furmay. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shir dib loogu eegayo mashaariicda Horumarinta Degmoyinka Puntland oo Qardho ka furmay.
July 23, 2019 - By: Mohamud Nadif
Madaxwayna ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa si rasmi ah u daahfuray shir dib loo eegayo mashaariicda horumarineed ee ka socda degmooyinka Puntland kuwaas oo ay isaka kaashanayaan Dawladaha Hoose, Dawlada Dhexe iyo hay’adaha deeq bixiyayaasha ah ee Puntland ka shaqeeya.
Duqa Degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan oo ugu horayn goobta ka hadlay waxa uu sheegay in shirkaan la rajaynayo in ay kasoo baxdo qiimayn rasmi ah oo lagu sameeyo shaqooyinka Dawlada hoose. Dawlada dhexena ay ka rajaynayaan in ay awoodaha xaga hoose usoo daadejiso.
Gudoomiyaha Gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye dhankiisa waxa uu hoosta ka xariiqay in shirkaan uu ahmiyad wayn u leeyahay Dadka Puntland. Ka maamul gobol ahaan doorkoodu yahay in Gobolka Kastaa degmooyinka ku daba galo sida loo fidinayo mashaariicda aasaasiga ee Dadweynuhu u baahan yahay.
Wasiirka Arimaha Gudaha Puntland Maxamex Axmed Dhabancad dhankiisa waxaa uu sheegay in ay ku dadaali doonaan sidii xal waara loogu heli lahaa caqabadaha haysta Dawlada Hoose ee Puntland.
Gudoomiyaha Degmada Garoowe Ahmed Bare oo ku hadlayay afka dawladaha hoose ee Puntland waxa uu Wasaaradaha Ka codsaday in culayska ay iska daadejiyaan. Oo mashaariicda loo daayo hirgelintoona.
Ugu danbayn Madaxweynaha ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash Ayaa daahfuray shirka waxa uuna sheegay in mashaariicdaan ay yihiin kuwa guuleystay Puntland ay ku dadaali doonto sidii ay usii balaarin lahayn. Waxa uu rajeeyay in kulan uu wax wanaagsan kasoo bixi doono.